Ọnụahịa nke Xiaomi Mi Band 3 abanyeworị | Gam akporosis
Edebere ọnụahịa nke Xiaomi Mi Band 3
Naanị ụbọchị abụọ ka emume Xiaomi na China. Ihe omume nke akara ngosi a ma ama ga-ewetara anyị ọtụtụ akwụkwọ ọhụụ dị iche iche. Otu n'ime ngwaahịa ndị anyị nwere ike ịma na ya bụ Xiaomi Mi Band 3. Ọgbọ nke atọ nke ọla aka ya na-aga nke ọma ga-ada n'ahịa ahụ n'oge na-adịghị anya, na ebumnuche nke ikpochapụ ahịa.
N'ime izu ole na ole, ekpughere ụfọdụ nkọwa banyere ya. Ọ bụ ezie na ọ gaghị abụ rue Tọzdee mgbe nkọwa niile nke Xiaomi Mi Band 3 a maara nke ọma. Mana ịmara ọnụahịa ya anyị agaghị echere ogologo oge ahụ.
Onwe ika i mehiela nke ibuli ọnụ ahịa mgbaaka na katalọgụ ngwaahịa gị, ọ bụ ezie na ha mechara ehichapụ ya. Mana ọtụtụ ndị ọrụ achọpụtala nke a ndị bidoro ịkekọrịta nseta ihuenyo a na ọnụahịa mgbaaka.
Ọnụ nke Xiaomi Mi Band 3 bụ yuan 169. Na mgbanwe ha ihe dịka euro 23, ya mere ọ na-ekwe nkwa ịbụ ọnụahịa nke nwere ike ịnweta ndị ọrụ. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume na ọnụahịa ya ga-adịtụ ntakịrị karịa mgbe ọ ruru ahịa Europe. Mana ọ ga-abụ na anyị ga-ama ọnụahịa ahụ na mmemme nke Tọzdee.
Nke a Xiaomi Mi Band 3 ka Huami mekwara. Ọdịdị ahụ na-ejigide akara nke ọgbọ gara aga, ọ bụ ezie na agbadoro akụkụ nke imewe ntakịrị karịa n'oge a. Ọzọkwa, a na-atụ anya na ihuenyo OLED dị ntakịrị karịa ọgbọ gara aga. Nke a ga-egosi ozi ndị ọzọ na ihuenyo.
SE na-atụ anya ka mgbaaka a ga-ere na China site na June 6. N'oge a, amabeghị ụbọchị mmalite nke Xiaomi Mi Band 3 na Europe. Ikekwe Tọzdee a, Mee 31, anyị ga-ahapụ obi abụọ banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Edebere ọnụahịa nke Xiaomi Mi Band 3
Ihe dị oke ọnụ n'uche m, ahụrụ m ya ihe na-emetụkarị na ncha ihu ngebichi ahụ ma ọ bụrụ na enweghị mpempe ọhụụ nke na-egosipụta ọdịiche dị na 2 ahụ, obere ogbugba ga
A ga-enye Lenovo Z5 na June 5
Na-asọpụrụ Play: A ga-ewepụta ama egwuregwu ọhụụ na June 5